What born am i? | HoLOLo....DiLoLO
What born am i?
စောရနက္ခတ်နဲ့ ယှဉ်မွေးတာတို့၊ ဘာတို့ ကြားဖူးကြမယ် ထင်တယ်။ ကျွန်မကျ ဘာနက္ခတ်နဲ့ ယှဉ်မှန်းမသိပါဘူး။ ကျွန်မလက်နဲ့ထိရင် ပျက်တာချည်းပဲ။ ကျွန်မအစ်ကိုကြီးက ဆိုရင် ခဏခဏ ပြောဖူးတယ်။ ကျွန်မက ဖျက်ဆီးရေး Monster တစ်မျိုးပဲတဲ့။ ဟုတ်များနေမလားပဲ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘာလုပ်လုပ် ပျက်တာများကိုကိုး။ အိမ်မှာ ပစ္စည်း ၁၀ခုပျက်ရင် ၉ခုက ကျွန်မလက်ထဲမှာ ပျက်တာ။ ကျွန်မထင်တာတော့ ပျက်ခါနီးကိုင်မိလို့များလားလို့ပါ။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို သူရော ကိုယ်ရော တူတူသုံးတယ်ဆိုအုံးတော့ ကျွန်မလက်ထဲက ပစ္စည်းပဲ အရင်ပျက်တာ၊ ပျောက်တာများတယ်။ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရှိလို့လားလဲ မသိပါဘူး။
တခါတခါဆို အဲဒီလို အပျက်ဓါတ်က ရက်ဆက်ကျတာ။ တခါတလေလည်း အကောင်းပါ။ ခုတလောတော့ အပျက်ဓါတ်လေးပြန်ကျနေပြန်ရော။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က ကျွန်မအရမ်းကြိုက်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ထီးအမည်း အရှည်လေး (ကျွန်မက ကျွန်မရဲ့ ကင်ဒိုဓါးရှည်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ) အဲဒါလေး ကိုင်းကျိုးသွားရော။ ဆောင်းမရတော့တော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာ။ ဒါတောင် ရုံးကလူတွေက ကျွန်မကို “ထီးပြောင်းလိုက်တာလား” မေးကြသေးတယ်။ မညှာမတာ။
နောက် ကျွန်မ ကျောပိုးအိတ်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ သော့ချိတ်လေးပျောက်သွားတယ်။ အစ်မတစ်ယောက်လက်ဆောင်ပေးထားတာ။ ကျွန်မသော့ချိတ်တွေက ခဏခဏတော့ ပျောက်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသော့ချိတ်လေးက အရမ်းကြိုက်လို့။ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။
ကဲ ဒီနေ့ရောက်ရော။ မနက် အိမ်မှာ Computer သုံးဖို့ ဖွင့်ပါတယ်။ Virus Scan လုပ်တုန်းရှိသေး ရပ်သွားပြီး Restart ပြန်ချတော့ Window ပြန်မတက်တော့ဘူး။ ကျွန်မ computer လေးကတော့ ခပ်စုတ်စုတ်ပါပဲ။ ကျွန်မခိုင်းသမျှလည်း မညည်းမညူလုပ်ပေးရှာတာပါ။ ကျွန်မကသာ ခုတလော သူနေမကောင်းတာ သိရက်နဲ့ ဟို Software တင် ဒီSoftwareတင် လုပ်နေတာ။
ထူးခြားတာတစ်ခုရှိတယ်။ computer ကလေ တခါမှ အစ်ကိုတွေ သုံးတုန်းပျက်တာမရှိဘူး။ ပျက်ပြီဆို ကျွန်မလက်ထဲချည်းပဲ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မပဲ ဖျက်ဆီးရေး သမားဖြစ်နေတာ။ ဒီနေ့လည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပျက်ပြန်ရော။
ဒါနဲ့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပဲ သင်တန်းကို ထွက်လာလိုက်တာ။ ကားကမှတ်တိုင်ကျော်သွားပြန်ရော။ ကားတဆင့်ပဲစီးချင်တာရော၊ လမ်းလျှောက်ရတာ ကြိုက်တာရော ကြောင့် အဲဒီလမ်းကြောကို ရွေးထားတာ။ ဆင်းနေကျမှတ်တိုင် ဆင်းရင်တောင် သင်တန်းရောက်ဖို့ 15 မိနစ်လောက် အချိန်ယူရပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ အချိန်က ကပ်နေရတဲ့ကြားထဲ။ ကျွန်မအတွေးလွန်နေတာနဲ့ ကျော်ရော မှတ်တိုင်က။ အသည်း အသန် လမ်းပြန်လျှောက်ရရော။
မိုးကာတစ်ဘက်နဲ့ ဖရိုဖရဲ ပြေးရင်းတန်းလန်း လွယ်ထားတဲ့ကျောပိုးအိတ်က ကြိုးပြတ်ကျပါလေရော။ စိတ်ညစ်သွားတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ သင်တန်းရောက်တယ်။
သင်တန်းပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်တီသောက်မယ် ဆိုပြီး သောက်နေကျ ဆိုင်သွားတာ။ ထူးထူးဆန်းဆန်းပိတ်ထားတယ်လေ။ ဒါနဲ့ အဲဒီအစ်မတွေကပဲ အိတ်ကပြုတ်သွားတဲ့ ကွင်းလိုက်ရှာပေးတယ်။ ကျွန်မကတော့ ကျောပိုးအိတ်လေး ပိုက်ထားရတာပေါ့။ ဟိုနားမှာ ရှိတယ် ဆိုလို့ သွားရင် ဆိုင်ပိတ်တာနဲ့။ ဒီနားဆိုရင် မရှိတာနဲ့။ အစ်မတွေလည်း သွားစရာရှိတာနဲ့။ ” ဆု နင် ဘုရားမရှိခိုး လာဘူးထင်တယ်” တဲ့။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ဥပုသ်နေ့မို့။ တရားတောင်နာခဲ့သေး။ ကံကိုမကောင်းတာ။ သူတို့ကလည်း ” နင်ခုတလော ဟိုဟာတလွဲလုပ်လိုက် ဒီဟာတလွဲလုပ်လိုက်နဲ့ ဟိုပျောက်ဒီပျက်နဲ့၊ နင်အိမ်ပြန်တော့တဲ့” ။ နောက်နေ့မှ ရှာပေးမယ်တဲ့။
ဒါတောင် ကျွန်မက ခေါင်းမာမာနဲ့ပဲ ကျွန်မသိတဲ့ အိတ်ပြင်တဲ့ဆိုင်ကို တကူးတက သွားတာတောင်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဆိုင်ပိတ်ပြန်ရော။ ဥပုသ်နေ့ကိုး။
ဒါနဲ့များတောင် အိမ်မပြန်သေးဘဲ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ခုထိ။
နောက်ထပ် ဘာတွေဖျက်ဦးမယ်တော့ မသိသေးဘူး။ ခပ်ကြောက်ကြောက်ပဲ။
August 9, 2008 by hololodilolo	about me, habits
← Poem & Thought
Body Tempo →
4 thoughts on “What born am i?”
နက္ခတ် နဲ့ ယှဉ် မွေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကံနိမ့်နေတဲ့ အခါများ အလှူအိမ်သွားတာတောင် ဖိနပ်ပျောက်ရသတဲ့။
IT WILL PASS AWAY…………….
တို့နဲ့ နက္ခတ်ချင်း တူပုံများ အခုမှပဲ စိတ်သက်သာရာ ရတော့တယ်။ ဩော်…. ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဖျက်ဆီးရေးသမား ဖြစ်နေတယ်မှတ်တာ၊ တော်သေးတာပေါ့။ အားမငယ်နဲ့ကွယ်။ တို့လည်း ရှိပါတယ်လို့